May 12, 2021 - Achawlaymyar
May 12, 2021 by Achawlaymyar
နိုင်ငံကျော် အကယ်ဒမီ အနုပညာရှင် နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ပြေတီဦး နှင့် အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့ ဇနီးမောင်နှံ ၂ ဦးကို ပုဒ်မ ၅၀၅ (က) ဖြင့်တရားစွဲဆို ခံခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ ပြေတီဦးနှင့် အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့ကို မနေ့ညနေ ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ နေအိမ်မှာ ဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်း MRTV မီဒီယာမှ ထုတ်လွှင့်ကြေညာသွားပါတယ် ဒီအမျိုးသမီးဟာ ဘဝမှာ ဘာမှမလိုချင်တော့အောင်ပြည့်စုံနေတဲ့ အမျိုးသ မီးတစ်ယောက်ပေါ့ ။ မျိုးရိုးဂုဏ်သိမ် ပြည့်စုံကြွယ်ဝတဲ့အမျိုးသမီးရုပ်ဆင်းအင်္ဂါမှာ ကုံလုံလှပတဲ့အမျိုးသမီး အနုပညာ ၊ အတတ်ပညာမှာ အရည်အချင်းရှိတဲ့အမျိုးသမီး အရည်အချင်းရှိတဲ့အမျိုးသားကို ပေါင်းဖက်နိုင်တဲ့အမျိုးသမီး ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုမှာ လူတန်းစေ့နေနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီး ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာ ကောင်းဂုဏ်သတင်းကျော်ဇောတဲ့အမျိုးသမီးအလွှာအသီးသီးက ချစ်ခင်အားကျခံရတဲ့အမျိုးသမီး ဒီလိုအစစ အရာရာပြည့်စုံနေတဲ့အမျိုးသမီးကပြည်သူပေးတဲ့အားနဲ့ ပြည်သူကျွေးတဲ့ထမင်းစားပြီး ရပ်တည်မှုရလာတဲ့သူမဟာ ပြည်သူအတွက် ရှေ့ထွက်လာခဲ့တယ် ။ သွေးဆိုတာ … Read more
ဘဝဆက်တိုင်း ကင်းမြီးကောက်နဲ့ တူတဲ့ သားသမီးတွေ မဖြစ်ကြပါစေနဲ့,,,
Zaw Gyi အောက်တွင် Unicode နှင့် ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည် ကင်းမြီးကောက်ပမာ သားသမီးတွေ မဖြစ်ပါစေနဲ့ ကင်းမြီးကောက် မိခင်တွေရဲ့ သဘော သဘာဝ က ကလေးပေါက်ဖွားပြီးတဲ့နောက်မှာ မိမိ ကလေးတွေကို မိမိ ခန္ဓာကိုယ်မှာ တက်ခိုင်းထားတာပါပဲ…. ကင်းမြီးကောက် အပေါက်လေးတွေဟာ ကင်းမြီးကောက် မိခင်ကြီးရဲ့ ကိုယ်မှာ နေရင်းနဲ့ ကင်းမြီးကောက်မိခင်ရဲ့ ကိုယ်က အသားတွေကိုပါ တဖြေးဖြေး စားလိုက် ကြတယ်.. သူတို့ အမေလည်းသေရော သူတို့လေးတွေ လည်း ကြီးလာရောပေါ့.. သူတို့ကိုယ်တိုင် လည်း သွားနိုင် လာနိုင်ရုံမက ရှာဖွေ စားသောက် နိုင်နေပြီပေါ့… ‌ဘယ်လောက်ထိ ကင်းမြီးကောက်မကြီးရဲ့ ကိုယ်က အသားတွေကို စားလည်းဆိုရင် ကင်းမြီးကောက်မကြီး သေဆုံးသွားတဲ့ အထိပေါ့.. ယနေ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ … Read more
လမ်းပေါ်မှာ ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ် ချထားခြင်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို သင်သိပါသလား..?
ဒီရဲ႕သေကၤတဟာ ႏိုင္ငံတကာမွာ ဆိုင္ကယ္ေမာင္းနင္သူေတြ လက္ေတြ႕လိုက္နာ က်င့္သုံးေနတဲ့ Biker Code ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ I need your help အကူအညီလိုအပ္ေနပါတယ္ လို႔ရည္ၫႊန္းပါတယ္ ဘီးေပါက္တဲ့အခါမ်ိဳး၊စက္ခ်ိဳ႕ယြင္းတဲ့အခ်ိန္၊ ဆီကုန္တဲ့အခ်ိန္၊ Accident ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္ အစရွိတဲ့ အခါမ်ိဳးေတြမွာ အကူအညီေတာင္းခံလို႔ရပါတယ္ တစ္ေလွတည္းစီးေနတဲ့ ဆိုင္ကယ္ခရီးသြား မိတ္ေဆြအခ်င္းအခ်င္း လမ္းမေပၚမွာ ဆိုင္ကယ္ဦးထုပ္ (Helmet) ေလးျမင္ပါကရပ္ၿပီးေတာ့ အကူအညီေပးၾကပါခင္ဗ်ာ။ တစ္ေန႔မဟုတ္တစ္ေန႔ ကိုယ္လည္း အကူအညီ လိုအပ္တဲ့သူျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ (Ko Ngal) Unicode လမ္းေပၚမွာ ဆိုင္ကယ္ဦးထုပ္ ခ်ထားျခင္းရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကို သင္သိပါသလား..? ဒီရဲ႕သေကၤတဟာ ႏိုင္ငံတကာမွာ ဆိုင္ကယ္ေမာင္းနင္သူေတြ လက္ေတြ႕လိုက္နာ က်င့္သုံးေနတဲ့ Biker Code ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ I need your help … Read more
အွန်လိုင်းမှာပျံ့နေတဲ့ မေလ ၁၅ ရက်နေ့ အင်တာနက်လိုင်းများ အကုန်ပိတ်မည်ဆိုသည့်သတင်း
အားလုံးသိချင်နေကျတဲ့ မေလ ၁၅ရက် နေ့ အင်တာနက် Wifi fiber လိုင်း များ ပြန် ပိတ် မပိတ် ဆိုတာကိုအားလုံး စိတ်ရှင်း သွားအောင်စေတနာ အပြည့်နဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် “မေလ ၁၅ ရက်နေ့ အင်တာနက် လိုင်းများ အကုန်ပိတ် မည်ဆိုသည့်သတင်းတတ် လာတာအားလုံး သိပြီးတွေ့ပြီးပြီလို့ ထင်ပါတယ်” အွန်လိုင်းမှာပျံ့နေတဲ့ မေလ ၁၅ ရက်နေ့အင်တာနက်လိုင်းများ အကုန်ပိတ်မည်ဆိုသည့်သတင်းမှာ အတည် မပြုနိုင်သည့် ကောလ ဟာလ သတင်းတစ်ခုသာသာ ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါ သတင်းနဲ့ ပတ် သက် ပြီး အတည် ပြု နိုင် သည့် မည် သည့် စာ မှ မထွက် ထားသေးသလို၊ISP တွေ ထံမှ လည်း … Read more
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမှ မရပ်သင့်သောနေရာ မနားသင့်သောနေရာ မစားသင့်သောနေရာ မပေါက်သင့်သောနေရာများ…
ဒီနေရာလေးကိုသိကြလား ။ဒီနေရာလေးက အမြန်လမ်း ၁၃၅ မိုင်မှာရှိတဲ့ အလယ်ကျွန်းမှာပေါက်နေတဲ့ ထန်းညီနောင်ပါပဲ အဲ့ဒီနားရောက်ရင် ကားရပ်ပြီးသေးပေါက် တာမလုပ်ပါနဲ့ လုပ်တော့ဘာဖြစ်လဲကွာဆိုရင် စမ်းကြည့်လိုက်လေ။ ကားကိုအနားပေးချင်လို့ခဏရပ်မယ်ဆိုရင်လည်း သင့်ကားပေါ်မှာ အညှီအဟောက် အစားအသောက်တွေမပါပါစေနှင့် ။ အထူးသဖြင့်ညဘက် မရပ်နားသင့်ပါ ။ 259 မိုင် သီးကုန်းနားမှာလည်း ညောင်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိတယ်။ အခန့်မသင့်လျင် နွားခလောက်သံ ခြူသံတွေကြားရတတ်တယ်။ အဲဒီနားမှာလည်း မနားသင့် သေးမပေါက်သင့်ပါဘူး ။ ကိုယ်တွေ့တွေရှိပါတယ် ။တံတားဘေးနားတွေမှာနားရင် သတိနဲ့နားပါ ။တချို့က အိမ်ကထည့်လာတဲ့ထမင်းဟင်းကို အမြန်လမ်းဘေးကသစ်ပင်ရိပ်အောက်တွေမှာ စားတတ်ကြပါတယ် ။ နေ့နေ့ညည ပရလောကသားတွေ ဟာ အမြန်လမ်းတလျောက်မှာ ရှိနေကြပါတယ် ။ လူဟာ သူတို့ထက်မြင့်ပါတယ်။ ဒါပေမည့် အမှားမလုပ်မိစေနဲ့ပေါ့ ခွင့်လွှတ်ခြင်း ဆိုတာသူတို့မှာမရှိဘူး ။ မယုံရင်စမ်းကြည့်လိုက် သင်ကံနိမ့်နေပြီဆိုရင်တော့…ဟုတ်ကဲ့ အမြန်လမ်းမှာ … Read more
သိပ်အနိုင်ယူလွန်းတဲ့သူတွေက တစ်ချိန်ချိန်မှာရင်ကွဲပတ်လက် ကျန်ခဲ့ရတတ်တယ် ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကို တွေ့ဖူးတယ် ။သူ့ ချစ်သူ ကောင်မလေး အပေါ်မှာသိပ်အနိုင်ယူလွန်းတာများ ဘေးကလူတောင်ဝင်တားရတာမျိုး အထိ။ရန်တွေ ဖြစ်ပြီး အနိုင်ယူတယ် ။သူ့ ဘက်က စိတ်တွေ အရင်ဆိုး ၊စိတ်တွေ အရင်ကောက်ပြီး အနိုင်ယူတယ် ။ စကားပြောရင်တောင် ခပ်ကြမ်းကြမ်း။သူ game ဆော့နေတဲ့ အချိန် ကောင်မလေး ။ဖုန်းဆက်လိုက်လို့ကတော့ အော်ပြီ ငေါက်ပြီ ။ဒီလိုမျိုး စရိုက် ရှိတဲ့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းကိုဟိုဘက်က ကောင်မလေးများ ချစ်လိုက်တာ တုန်လို့ ။ အရမ်းသည်းခံတယ် ။ငေါက်နေရင် ၊ အော်နေရင်တောင် မျက်ရည်လေး ဝဲပြီး ဘာမှ ပြန်မပြောနိုင်ပဲ ကြည့်နေရှာတာမျိုး။ ဒါပေမဲ့ပေါ့ ။တစ်ဖက်က အရမ်းချစ်ပြီး ဂရုစိုက်ပေမဲ့လည်းထက်တူညီ တုန့်ပြန်မှုတွေ … Read more
ဆန္ေဆးေရနဲ႔ ေခါင္းေလၽွာ္ျဖစ္ေအာင္ ေလၽွာ္ၾကည့္ပါ…
ဆန္ေဆးေရနဲ႔ ေခါင္းေလွ်ာ္ၾကမယ္ ဆန္ေဆးေရ ဆိုတာဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေန႔စဥ္စားတဲ့ဆန္ကို ထမင္းအျဖစ္ မခ်က္ခင္မွာ ေရနဲ႔ ဆန္ကို ေဆးရာကေန ရတဲ့ ေရပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ဆန္ေဆးေရကို သြန္ပစ္ၾကေလ့ရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ေရွးယခင္ကတည္းက ဆန္ေဆးေရရဲ႕ အက်ိဳးအာနိသင္ကိုသိၿပီး ဆန္ေဆးေရကို အလွအပအတြက္သုံးခဲ့တဲ့ လူေတြလည္းရွိပါ တယ္။ သုေတသနပညာရွင္မ်ားရဲ႕ အဆိုအရ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ Heian ေခတ္ (794 AD – 1185) မွာ ဂ်ပန္ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ဆံပင္အရွည္ဟာ ေခါင္းကေန ေျခဖ်ားထိရွိၿပီး ဆံသားကလည္း ‌းေကာင္းတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဲ့လိုဆံပင္ရွည္ၿပီး ဆံသားေကာင္းဖို႔ကို ဆန္ေဆးရည္နဲ႔ ေခါင္းေလွ်ာ္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ သုေတသန ပညာရွင္မ်ားက ဆိုပါတယ္။အဲ့ေခတ္ကာလက ေတာ္ေတာ္ၾကာခဲ့ၿပီဆိုေတာ့ … Read more
နောင်တချိန်မှ နောင်တမရချင်ရင် ဖတ်ကြည့်နော် (သွေးထွက်အောင်မှန်တယ်)
ဒီစာလေးကိုဖတ်ကြည့်ပြီး အတွေးတစ်ခုခုရသွားမယ်၊ အသိတရားတစ်ခုခု ရသွားမယ်ဆို ကျေနပ်နေပါမယ်။ ၁။အိမ်သန့်ရှင်းရေး၊ ထမင်းချက်၊ အဝတ်လျှော် နှင့် လိုအပ်သော ကိစ္စမှန်သမျှလုပ်ဆောင်ရမည်။ ၂။တစ်နေ့လျှင် ၁၂ နာရီအနည်းဆုံးလုပ်ဆောင်ရမည်။ ၃။အလုပ်ချိန်ဟူ၍မရှိပါ။မနက်မှ ညအထိ လိုအပ်သလို အလုပ်ဆင်းရပါမည်။ညအိပ်ချိန်၌လည်း လိုအပ်ရင်နိူးပြီးခိုင်းပါမည်။ ၄။အနည်းဆုံး ၁၅ နှစ် ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်ရပါမည်။ ၅။လုပ်ခလစာ မရှိပါ။ ၆။အလုပ်လုပ်ပေးရတဲ့ အတွက် ကျွန်တော်တို့ကို ပြန်လည်ပြီးလိုအပ်သော ငွေကြေးများကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးရပါမည်။ ဒီလို အလုပ်ခေါ်စာနဲ့အလုပ်ခန့်လျှင် မိတ်ဆွေ အနေနဲ့ပျော်ရွှင်စွာ လုပ်ငန်းခွင်ကို ဝင်နိုင်မလား? သေချာပါတယ်။ဘယ်နည်းနဲ့မှ လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမယ့် ဒီအလုပ်တွေကိုပျော်ရွှင်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့လူနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုတာ မိတ်ဆွေသတိထားမိပါလား။မိတ်ဆွေမွေးဖွားချိန်ကစတင်ပြီး ယခုအချိန်အထိ မိတ်ဆွေရဲ့လိုအပ်သော ကိစ္စမှန်သမျှ လုပ်ခ လစာ မရပဲလုပ်ဆောင်နေတဲ့လူနှစ်ယောက်က ဘယ်သူလဲ ဆိုတာကတော့ သင့်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးပါ။ သူတို့အတွက် မိတ်ဆွေ ပြန်စဉ်းစားပြီးပြီလား။သူတို့ရဲ့လုပ်အား ငွေကြေး အချိန်အားလုံး … Read more
နာကျင်လွန်းလို့ ကျွန်မ ငိုကောင်း ငိုနိုင်ပါတယ် ကိုယ့်ကိုကိုယ်အပြစ်တင်ရင်းလဲ ဒေါသထွက်ကောင်းထွက်နေနိုင်တယ် အချိန်တွေ ဖြုန်းခဲ့မိလို့ နောင်တတွေ ရနေတာလဲ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ် ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါ လမ်းခွဲမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးသွားရင် နောက်ပြန်လုံး၀ ငဲ့မကြည့်နဲ့ ကျွန်မ သေချင်သေသွားပါစေ လုံး၀နောက်ပြန်လှည့်မလာနဲ့ကျွန်မဆိုတာ အသနားခံ သတ္တဝါတစ်ကောင် မဟုတ်ဘူး မိန်းကလေးတစ်ယောက်မှာ မာနဆိုတာရှိတယ် သိပ်ချစ်မိတဲ့အခါ အဲ့ဒီမာနတွေက မရှိသလောက်ဖြစ်နေပေမယ့် သိပ်မုန်းမိသွားတဲ့ အဲ့ဒီမရှိတဲ့မာနတွေကပဲ မိုးထိုးတဲ့အထိ ဖြစ်သွားတတ်တယ် ဒါသဘာ၀ပါ သိပ်ချစ်လွန်းလို့ နှလုံးသားက တောင့်တနေရင်တောင် ဦးဏှောက်က ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ လက်သင့်ခံတော့မှာ မဟုတ်ဘူး တိုက်ဆိုင်မှုတွေရှိလာလို့ သတိရချင်တဲ့အခါ ရမယ် ဒါပေမယ့် ပြန်လိုချင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး ဘယ်လောက်ပဲ ချစ်ချစ်ပါ ကိုယ့်ကို မလိုချင်တော့တဲ့လူမျိုးတစ်ယောက်ကို ပြန်ပြီးလက်သင့်ခံဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုရှုထောင့်ကပဲ ကြည့်ကြည့် ဘယ်နည်းနဲ့မှ မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာလေ ဒါကြောင့် … Read more
အင်္ဂါသားသမီးလေးတွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ တကယ်ချစ်ပေမယ့် ချစ်မပြတတ်တဲ့အကြောင်း
စွမ်းအားကြီးမားပြီး စိန်ခေါ်မှုတွေကို နှစ်သက်တဲ့အင်္ဂါသား၊ သမီးတွေဟာအခက်အခဲတွေနဲ့တွေ့ရင် အရှုံးမပေးဘဲရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့သူ၊ မိသားစုအတွက် ရှေ့ကနေမားမားမတ်မတ် ကာကွယ်မယ့်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်အကိုင်၊ စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်း ကောင်းကောင်းကိုင်တွယ်နိုင်ပြီး အောင်မြင်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိကြတဲ့ အင်္ဂါသား၊သမီးလေးတွေရဲ့ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်သမျှ ကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ရင်ထဲက ခံစားချက်တွေကို လွယ်လွယ်နဲ့ဖွင့်ဟလေ့ မရှိတာကြောင့် အချစ်ရေးမှာအထီးကျန်တဲ့ ခံစားချက်မျိုး အမြဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ချစ်တဲ့ သူကိုစကားလုံးတွေနဲ့ နာကျင်အောင်ပြောဆိုတတ်တဲ့ အကျင့်ဆိုးရှိပြီး အဲ့ဒီအကျင့်ကြောင့်တကယ်ချစ်တာ မဟုတ်ဘူးလို့ သတ်မှတ်ခံရတတ်ပါတယ်။ရိုမန်း တစ်မဆန်တတ်ဘဲ တဲ့တိုးပြောတတ်တဲ့သူတွေ၊ ချစ်တာကိုအပြောနဲ့မဟုတ်ဘဲ လုပ်ရပ်နဲ့သက်သေပြတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ မရိုတတ်ပေမယ့် အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ကာကွယ်ပေးမယ့်၊ ဖေးမပေးမယ့်သူ၊ ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမှာ ကိုယ့်ချစ်သူကို ဘယ်တော့မှ လက်တွဲမဖြုတ်မယ့် သူလေးတွေပါ။ ရင်ထဲမှာ တကယ်ချစ်ပေမယ့် ချစ်မပြတတ်တော့ တခါတလေငြီးငွေ့စရာကောင်းတယ်ဆိုပြီး ချစ်သူကပြဿနာရှာတာကိုခံရတတ် တယ်။ချစ်တာကို မကြာခဏထုတ်မပြော တတ်ပေမယ့် ချစ်သူကို ဖူးဖူးမှုတ် ထားမယ့်အချစ်ကြီး သူတွေဆိုတာကေတာ့ အသေအချာပါပဲ။ … Read more